First ...343 51 52 53 54 55 63 ... Last
06-07-2011 03:32 AM #521
So did you manage to get back your passport? Have you lodgedapolice report? I think if i were you, I will report to police and let the police settle. This is the failure of service agency. I have no confidence/trust on the embassy at all.
cohtet, Incubuz, kokoye, mgmgthan, mrlynn, Perigee, skyblue199, sunny007
06-07-2011 04:46 AM #522
Originally Posted by 4tee
tJ'D udpörsdK;qefqef uRefawmfjzpfzl;ygw,f/ uRefawmfu ywfpydkYpfjyeftyfwm/ at;*sifYu7xyfu Golden Diamond qdkvm;? emrnfenf;enf;arYaew,f/ EdkifiHom;pGefYwmqdkawmY tcGeftm;vkH; &Sif;&ygw,f/ b,fESpfvpm qdkNyD; wGufNyD; ay;cJYygw,f/
Renounce letter oGm;,lawmY uRefawmf t&if &efukefrSmjyefaewJY7vpm aqmifvdkuf&w,f/ olwdkY pdkufaqmifxm;w,f tJ'gjyefay;rS pm&r,f jzpfoGm;ygw,f/ wu,fqdk tJ'D7vu &efukefrSm jyefaewJY t0iftxGuf wkH;awGvnf;&Sdw,f/ tvkyfxGufxm;wJY pmvnf;&Sdw,f/ tJ'DaemufrSmrS tcGefxyfaqmifxm;NyD;om;? ywfpydkYpf oufwef;wdk;xm;NyD;om;/ 'DrSm vlvnf; r&SdbJ tvkyfvnf; rvkyfbJ? aqmif&r,fajymwmyg/ raqmifcifvnf; uRefawmfYudk zkef;eJY taMumif;rMum;ygbl;/
uRefawmf ckxufxdvnf; wu,faqmifvdkuf&w,fvdkY r,kHygbl;/ bmjzpfvdkYvJ qdkawmY xGufvmwJY pm&Gufu oH&kH;u jzwfydkif;ayr,fY tcGefpm&Gufvnf; r[kwfbl;? b,fvuae b,fvtxd tcGefqdkNyD;vnf; a&;rxm;ygbl;/
at;*sifYeJY tBuD;tus,f tjiif;tckefjzpfygw,f/ aemufqkH;olwdkYu ydkufqHjyefay;r,f? Renounce rvkyfzl; qdkNyD; pmtkyfjyefawmif;ay;r,f b,favmufMumrvJ qdkwmawmY rodbl;/ udk,fYzmom jyef Renounce vkyfvdkYajymygw,f/
&Jvnf; oGm;wdkifvdkufygao;w,f/ &Ju tcsuftvufawG at;*sifYvdyfpmawG rSwfxm;NyD;? oH&kH;&JU w&m;0ifat;*sifYvnf; r[kwf? pmcsKyfeJY tyfwmvnf; r[kwfawmY olwdkY 0if&cufw,f/ oH&kH;uae True Copy awmif;ygvdkY ajymygw,f/
oH&kH;vnf; oGm;ygao;w,f/ at;*sifYeJY &Sif;? olwdkYqD bmaMumifY udk,fwdkifrvmvJ? (at;*sifYeJY olwdkY trsdK;rawmfwm MuaewmyJ/) True Copy vnf; ray;Edkifbl;wJY/
tdkifpDat vnf; a&mufygw,f/ 'Dvdkjzpfw,f/ True Copy udk oH&kH;udk olwdkYtaeeJY vSrf;awmif;vdkY &vm;vdkY ar;MunfYygw,f/ olwdkYu udk,fYoH&kH;udpö udk,fYzmom &Sif;yg/ olwdkYuawmY Renounce tcuftcJjzpfvdkY apmifYygqdk apmifYay;ygYr,f ajymygw,f/
aemufqkH;awmY at;*sifYudk 560 tydkay;vdkuf&ygw,f/ 560 xuf vdrfawmif;cH&wm rcHcsifwmygyJ/
wu,fawmY at;*sifYudk ywfpydkYpfay;vdkufNyD;&if udk,fYzufu &IH;zdkY rsm;aeygNyD/ &JuawmY ydkufqHydkawmif;w,f oGm;wdkif&if? ydkufqHydkay;NyD; a&G;zdkYyJ ajymr,f xifygw,f/ vkH;0 vdrfoGm;w,f? ywfpydkYpf qkH;oGm;w,f qdkrSyJ vdkufvkyfay;r,f xifygw,f/
badinf, barronbala, batoe, bigxxx, blooom, brokenworld, Chit Suu, Chit.tat.lun.tu, cupid_boy, Deadmanwalking, foruall22, Incubuz, jsn_woo, KaungKinPyar, kokoye, La Goon, mgchaint, mgmgkyaw, mgmgthan, mrlynn, nakamura, Nenemosha, nnbrownie, Perigee, Ravan, skyblue199, solidsnake, sunny007, SuperPooh, sweetee, thaw-t, ThunderHawk, tiptop, unicorn7, wasabi, zzz
06-07-2011 08:07 AM #523
tvkyf&SmwJY qkd'fwpfckrSm tvkyfwpfckukd MNC twGufvkdYac: xm;NyD; wu,fac:awmY 'DvdyfpmeJY jzpfaevkdY enf;enf;oHo,&SdaevkdYyg/
46 HOng Kong Street Unit no is C
Singapore 059684 .
(Besides Carpenter street ) 3RD FLOOR..
ay;wJY vdyfpmuvnf; China Town em;rSmqdkawmY [kdwpfcg usL;ypfrSm ajymzl;wJY vlvdrfukrÜPDrsm; jzpfaervm;vkdY.../
odwJYolrsm; enf;enf;avmuf ajymjyygvm;/
trSeftuefvm; tBuHtzefvm; qkdwmav;.../
barronbala, Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, mrlynn, nnbrownie, Perigee, skyblue199, wasabi
06-07-2011 08:08 AM #524
wckavmuf tultnDawmif;csifvdkhyg usL;ypfu abmf'gwdkha&....
usaemfh rdwfaqGwa,mufu pifumyludk social visit eJhvmvnfjyD;2vjynfawmh jyefoGm;ygw,f... tJ'Dwkef;u passport ta[mif;yJ &Sdygao;w,f tckvdk epassport r[kwfao;ygbl;? tck aemufwcg xyfvmvnfawmh passport topfvJvmygw,f.... tJ'g tck'DrSm 1vjynfhoGm;vdkh visa oufwr;fwkd;zdkh twGuf have you entered to singapore with another passport vdkh ar;xm;wmudk yes vm; no vm; rodvdkhygwJh ... odwJhvlrsm;&Sd&ifulnDay;Muyg... b,fvdkjznfh&vJ qdkwmav;odcsifvdkhyg....
barronbala, Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, mrlynn, nnbrownie, Perigee, skyblue199, ThunderHawk, wasabi
06-07-2011 08:20 AM #525
Originally Posted by gerfin
have you entered to singapore with another passport
No yJjznfh&r,f xifwmyJ/ wjcm; passport qdkwm wjcm;eHygwfeJ h[mudk qdkvdkwmxifygw,f/ xifwmyJaemf/
barronbala, gerfin, Incubuz, kokoye, mrlynn, nnbrownie, Perigee, skyblue199, ThunderHawk
06-07-2011 08:33 AM #526
tck aemufwcg xyfvmvnfawmh passport topfvJvmygw,f.... tJ'g tck'DrSm 1vjynfhoGm;vdkh visa oufwr;fwkd;zdkh twGuf have you entered to singapore with another passport vdkh ar;xm;wmudk yes vm; no vm; rodvdkhygwJh ... odwJhvlrsm;&Sd&ifulnDay;Muyg... b,fvdkjznfh&vJ qdkwmav;odcsifvdkhyg....
tJ'Dar;cGef;u tckwpfacgufvmawmh ADZm avQmufwkef;rSm ygw,f / NyD;awmh White Card rSmvnf; jznfh&w,fav / tJ'DrSm b,fvdk jznfhxm;wkef; / tJ'DrSm jznfhwJh[meJY wlatmifom jznfhAsdKU /
barronbala, Chit.tat.lun.tu, gerfin, Incubuz, kokoye, mrlynn, nnbrownie, Perigee, skyblue199, tiptop, wasabi
06-07-2011 08:38 AM #527
No vdkYyJjznfh&ygw,f/ tdkifpDatrSm t&ifwcg azmifwif&awmh yes vdkYjznfhvdkufwm jyefjyifcdkif;ygw,f/ pmtkyftopfajymif;jyD; eHygwftopfcsdef;wm tMuHK;r0ifygbl;wJh/
badinf, barronbala, Chit.tat.lun.tu, Deadmanwalking, gerfin, Incubuz, kokoye, mrlynn, nnbrownie, Perigee, roger, skyblue199, tiptop, wasabi, Ye Win Soe
06-07-2011 08:54 AM #528
ကြုံမှ ကြုံတတ်ပလေတယ် ကိုထက်ရယ်
အေးဂျင့်နာမည် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလား။ Diamond Palace ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဘဲ။ တစ်ခုလောက် သတိထားမိတာရှိတယ်ဗျာ။ သူတို့အလုပ်လုပ်တာက off record လိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။ ဥပမာ ဆိုပါစို့ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၈၀ ဆောင်ရမယ်ဆိုရင် အဲဒီအတွက် ကုတ်တေးရှင်း တို့ အင်းဗွိုစ် တို့ဆိုတာ တရားဝင် အလုပ်သဘောအရ စာရွက်စာတမ်းနဲ့ ထုတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ ရဲလုပ်ငန်း ဥပဒေရှူ့ထောင့်ကကြည့်ရင် အမှုတည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ သူတို့ထုတ်ပေးတာက ငွေရပြေစာ ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုသာပါ။ အဲဒါကလည်း လက်တာဟက် တို့ဘာတို့နဲ့ ထုတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ အရေးဟဲ့ အကြောင်းဟဲ့ဆို ဘာမှ အထောက်ကူမဖြစ်ဖူးခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ မိအေး နှစ်ခါနာ ဇာတ်လမ်းတွေလည်းမကြာခဏကြားရတော့တာပါဘဲ။
အေးဂျင့် နှင့် လုပ်ပြီး အဆင်ပြေသွားကြတဲ့ လူတွေလည်းမနည်းပါ။ စောင့် ရတဲ့ ဒုက္ခ၊ တန်းစီရတဲ့ ဒုက္ခ၊ အအော်ငေါက်ခံရတဲ့ ဒုက္ခ၊ ခွင့်ယူရတဲ့ ဒုက္ခ စတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့် ကျနော်တို့ တတွေ ကပွဲစားတွေကို အလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်တဲ့အခါ သံရုံးကဘာမှ အားကိုးလို့မရပါ။ သံရုံးက ပိုက်ဆံလာပေးမယ့် လူတွေကိုတောင် မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံသေးတယ်ဆိုမှတော့ အခြား ဒုက္ခရောက်သူ/ အခက်အခဲဖြစ်သူတွေကို ကူညီတဲ့ သမိုင်း/အစဉ်လာ ရှိတယ်လို့မကြားမိပါ။ သံရုံးက လူတွေ ဘာမှ မတောင်း/မပေးရဘဲ ကူညီလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေဘဲနေမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်ပီဟဲ့ဆိုရင် သံရုံးက သုံးစားမရတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်လည်း မိန်းမ အခွန်ဆောင်တုန်းကခံလိုက်ရပါသေးတယ်။ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ပတ်စပိုစ် ကိုယ့်လက်ထဲရောက်အောင်ဘဲ အလိမ္မာနည်းသုံးပြီး တောင်းတာပေးလိုက်ပါ။ မပေးနိုင်တဲ့အခြေနေရောက်ရင်တောင်မှ တစ်နည်းနည်းနဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေနေမရောက်အောင် သည်းခံလိုက်ပါ။ ကို့လက်ထဲ ပတ်စပိုစ် ရောက်လာပြီဆိုမှ ကြိုက်သလိုပြောဆိုတာဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်တန်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြပေါ့။ ခုကိစ္စက စောစောကပြောပြီးသလိုပါဘဲ ဘာမှအထောက်ထားမခိုင်မာတော့ ရဲလဲအားကိုးလို့မရ ၊ သံရုံးသွားလည်း အအော်ခံရတာဘဲရှိမယ် ၊ နောက်ပြီး ပွဲစားတွေဆိုတာကလည်း သူတို့ပြောသလိုပါဘဲ သံရုံးကို အိပ်ထဲ ထည့်ထားနိုင်တဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေဆိုတော့ တစ်သံတည်းထွက်ကြတော့တာပေါ့ဗျာ။
ကျနော့တုန်းကလည်း ကိုထက်လိုဘဲ အလုပ်နားနေတဲ့ ကာလတွေအတွက် အခွန်မဆောင်လိုတဲ့အတွက် စာရွက်စာတမ်းတွေ အသေချာပြတယ် ၊ နောက်ပြီး လက်ခံတဲ့လူကိုလည်း ကျနော်မှာတဲ့အတိုင်း/ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးပါ၊ မရဘူး ဒါမှမဟုတ် အပြောင်းးလဲတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျနော့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမှ ရှေ့ဆက်လုပ်ပါဆိုပြီး ဆက်ဆက်မှာ ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှေ့မှာ မိန်းမအခွန်ဆောင်တုန်းက ခံခဲ့ရပြီးပြီဆိုတော့ အသေချာမှာရတာပေါ့ဗျာ။ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
နောက် လမ်းကြုံတုန်း သတိပေးလိုတာက ဒီလို ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အတတ်နိုင်ဆုံး စာရွက်စာတမ်တွေ/လက်ခံတွေတောင်းကြပါ။ အခွန်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စမို့သာဒီလို လုပ်လို့ရတာပါ လေယဉ်လက်မှတ်ကိစ္စကတော့ သက်သေအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ မို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ရင် ဆော်သာဆော်၊ ကြောက်စရာမရှိပါ။
နောက်ထပ် အရေးတကြီး သတိပေးလိုတာက ပမာဏ များများ ငွေလွှဲရာမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး အွန်လိုင်း နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အကောင့် ကနေလွှဲတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးပြီးလုပ်စေချင်ပါတယ်။ ငွေသား အထပ်လိုက်ကိုင်ပြီး ငွေလွှဲတဲ့အခါ ဘာမှ အားမကိုးလောက်တဲ့ စာရွက်ဖြတ်ပိုင်းလေးသာရပါတယ်။ လက်တာဟက်လည်းမဟုတ် ၊ ကန်ပဏီ တံဆိပ်တုံးလည်းမပါ ၊ ရုတ်ဆွအဆုံး ပေးလိုက်တဲ့စာရွက် လက်ခံဟာ အရေးအကြောင်းဆိုဘာမှ သုံးစားမရတာ သတိပြုကြပါခင်ဗျာ။ စောစောကပြောတဲ့ အွန်လိုင်း နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အကောင့် ကနေလွှဲတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်တဲ့အခါ အရေးအကြောင်းဆို မှတ်တမ်း ရှိလို့ အနည်းဆုံး အမှုဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ခင်တယ် မင်တယ် သိတယ် ဆိုပြီး အလွယ်မလုပ်စေချင်ပါ။ ငွေလွှဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ခံရနိုင်တာလေးတွေကို တွေ့တွေ့နေရလို့ တဆက်တည်း သတိပေးလိုက်ပရစေလားဗျာ။
badinf, barronbala, Chit Suu, Chit.tat.lun.tu, cohtet, einda74, einthu, Incubuz, johnansen, KaungKinPyar, kokoye, nnbrownie, Perigee, petit, Ravan, roger, skyblue199, solidsnake, ThunderHawk, tiptop, wasabi, Ye Win Soe, zzz
06-07-2011 08:59 AM #529
Spam vkyfwmawmY r[kwfygbl;/
b,folrS rajzvkdY taemufbufuae ta&SUbufjyefukwfvmwmyg/
barronbala, Chit.tat.lun.tu, cohtet, GreenHat, Incubuz, kokoye, mrlynn, nnbrownie, Perigee, petit, skyblue199, suuchit, ThunderHawk, wasabi, Ye Win Soe
06-07-2011 09:11 AM #530
emhtxif [dkaeYuajymovdkaygh agent or recruitment company wckckjzpfzdkYrsm;w,f/ MNC awGu olwdkY&JY Job Vacancy twGuf at;*sifhudktyfMuwmav.. wu,fvdkYudk,ftvkyf&w,fqdk&if tJhukrfyPDu yJ at;*sifhawGudk agent fees ay;&w,f.. udk,fuawmhay;p&mrvdkbl;.. emodwmxm;av; ajymjywm..
barronbala, Chit.tat.lun.tu, cohtet, Deadmanwalking, GreenHat, Incubuz, kokoye, mgknow, mrlynn, Nenemosha, nnbrownie, Perigee, petit, skyblue199, suuchit, wasabi, Ye Win Soe